Wasiirka Maaliyadda oo shacabka uga warbixiyay Miisaaniyadda sanadka 2018-ka – Radio Muqdisho
Wasiirka Maaliyadda oo shacabka uga warbixiyay Miisaaniyadda sanadka 2018-ka
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa maanta ka qayb galay kulan ka dhageysiga Dadweynaha ee Miisaaniyadda 2018 ka.
Guddiga Maaliyadda ee Baarlamaanka Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa Su’aalo si toos ah Caalamka looga daawanayay wiidiiyay Masuuliyiinta Wasaaradda oo uu hor kacayay Wasiir Bayleh.
Barnaamijka dhageysiga Dadweynaha ee Miisaaniyadda 2018 ka waxaa sidoo kale su’aalaha qeyb ka ahaa Dadweyne ka socday Bulshada qeybeheeda kala duwan oo doonayay in ay helaan turxaanbixin ku saabsan kororka Miisaaniyadda ee Adeegyada Bulshada sida Waxbarashada iyo Caafimaadka.
“Wasaaradda Maaliyadda waxaa ka go’an in si hufan oo wadaninimo ah loogu shaqeeyo Qaranka, waxaa kale oo sharaf ii ah in si daahfuran aan Dadweynaha ula wadaago Miisaaniyadda 2018-ka” ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda Mudane Cabdiraxmaan Ducaale Bayle.
Miisaniyadda 2018 waxaa hore u soo meelmariyay Golaha Wasiirada Soomaaliya, iyadoo hada ay hortaalo Golaha Shacabka Soomaaliyeed.
Misaaniyadda 2018 waxa ay uga duwantahay Miisaaniyadihii hore ee Dalka soomaray labo arrin oo kala ah,
In lagu daro qoondada Adeega Dadweynaha, sida Caafimaadka iyo Waxbarashada
Waa markii ugu horeysay ee Taariikhda oo bulshada Soomaaliyeed laga talo geliyo miisaaniyad Qaran, waana sababta maanta laagu qabtay munaasibad si toos ah Warbaahinta looga daawanayay.
Dhegeyso: Warka Duhur 02-12-2017
Dadka deegaanka Xerada Dhadhaab oo ku hor banaan baxay xafiiska UNHCR “SAWIRRO”
Dadka deegaanka Xerada Dhadhaab oo ku hor banaan baxay xafiiska UNHCR "SAWIRRO"